Soo dejisan Borderless Gaming 9.5.6 – Vessoft
WindowsMadadaaloXakamaynta waxqabadkaBorderless Gaming
Bogga rasmiga ah: Borderless Gaming
Ciyaarta aan xudduud lahayn – aaladda yaryar oo loogu talagalay in ay maamusho ciyaaraha iyo codsiyada qaabka buuxa ee xuduud la’aan ah, iyadoon loo eegin haddii mawduucaan la taageerayo ama la diidey. Muuqaal ka mid ah software-ka waa si dhakhso ah oo si habsami leh u kala bedela cayaaraha iyo codsiyada kala duwan adigoo isticmaalaya isku xirka Alt + Tab keyd. Goobta xuduud la’aanta ah ayaa meesha ka saaraysa sugitaanka dheer ee u dhexeeya furayaasha waxayna ka hortagtaa wixii shil ah ee dhici kara isticmaalka badan ee isku-dhafkan muhiimka ah. Software wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood, mid muujinaya hababka socodka ee cayaaraha iyo codsiyada, kuwaas oo u baahan in loo wareejiyo qayb kale, si ay si toos ah ugu beddelaan habka buuxa ee xuduud la’aan ah. Ciyaarta aan xuduud laheyn waxay ku xirantahay ciyaaraha caanka ah waxayna taageertaa isticmaalka kormeerayaasha badan.
Ku ciyaarida ciyaaraha qaabka xuduudaha buuxa
Si dhakhso ah oo siman oo udhexeeya daaqadaha
Isticmaalida kormeerayaal badan
U hoggaansanaanta ciyaaraha caanka ah
Soo dejisan Borderless Gaming
Faallo ku saabsan Borderless Gaming
Borderless Gaming Xirfadaha la xiriira